Tesla बन्यो विश्वको मूल्यवान Auto Company
विज्ञान र प्रविधि Tesla बन्यो विश्वको मूल्यवान Auto Company
अमेरिकी विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी टेस्ला विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान अटो कम्पनी बनेको छ । जापानी कार निर्माता कम्पनी टोयोटालाई उछिन्दै टेस्ला विश्वकै सर्वाधिक मूल्यवान कम्पनी बनेको हो ।
बुधवार कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४ प्रतिशतले बढेसँगै बजार पूँजीकरण २ खर्ब ७ अर्ब २० अर्ब डलरमा पुगेको थियो । तर टोयोटाको शेयर मूल्य भने १ प्रतिशतले घटेर बजार पूँजीकरण २ खर्ब ३ अर्ब डलरमा समेटिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि खोले टिकटक अकाउन्ट , एकैदिनमा भाइरल !
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ओलीले पनि टिकटक एकाउन्ट खोलेका छन ।उनलेले आइतबार ‘केपी शर्मा ओली अफिसियल’ नामक टिकटक एकाउन्ट खोलेका हुन् ।
विज्ञानले नयाँ नयाँ खोजको विकास गरेको छ । कसैको कल्पनामा पनि नभएका कुराहरु विज्ञानले सम्भव तुल्याइदिएको छ ।
अनलाईन मार्फत iPhone अर्डर गर्दा, घरमा लुगा धुने साबुन आइपुगेपछि….
नेपाल अनलाइन पत्रिका - October 31, 2020 0
व्यस्त जीवनशैलीका कारण मानिसले अनलाईन अर्डर गरेर सामान मगाउने गरेका कारण पछिल्लो समय अनलाइन सपिङले राम्रो बजार पाएको छ । त्यतिमात्र होइन बजारमा हुने भीडभाडबाट बच्नका लागि पनि यो उपाय राम्रो देखिएको छ ।
मंगल ग्रहका लागि हरेक दिन ३ उडान, पृथ्वीबाट १० लाख मानिस लगिने (भबिस्य को तयारि )भिडियो सहित
मंगल ग्रहमा जानको लागि हरेक दिन ३ उडान संचालन हुनेछन् । हरेक उडानमा १०० जना मानिसले मंगल ग्रह जान पाउनेछन् ।